PaÃ¼ Heidemeyer | | sakafo, sakafo
Ity sakafo kely ity dia manana toetra mampiavaka azy ao anaty izay tena mahasoa ny vatana, manaikitra kely izay afaka manatsara ny fahasalamana tokoa.
Raha mbola tsy fantatrao ny tombotsoan'ny cranberry dia tohizo hatrany ny famakiana ireo andalana ireo satria holazainay aminao ny fomba hikarakaran'izy ireo anao sy hanatsara ny fahasalamanao.
Manolotra tombontsoa lehibe mahavelona izy ireo sakafo ara-pahasalamana tsy noraharahaina. Ireo voankazo mena ireo dia manome tsiro marikivy nefa mamy ihany koa, na dia ny manga manga izay fantatsika tsara indrindra dia ilay manga mainty saika mainty.
Lingonberry dia mifandray mivantana olana mifandraika amin'ny tatavia sy ny aretin'ny urineNa izany aza, afaka manampy antsika amin'ny lafiny hafa amin'ny fahasalamantsika izy ireo.
1 Tombony azo avy amin'ny cranberry
1.1 Izy ireo dia misoroka ny aretin-tsaina
1.2 Mampihena ny risika homamiadana
1.4 Ny voajanahary voajanahary
1.5 Manatsara ny fahitana
1.6 Sakafo manohitra tavy
1.8 Mampihena diabeta
1.9 Mampitombo ny tahan'ny kolesterola tsara
1.10 Hitombo ny asanao sy ny fahatsiarovanao
Tombony azo avy amin'ny cranberry
Ny Lingonberry dia misavoritaka amin'ny blueberry mino fa hanandrana mitovy ihany izy ireo, na izany aza. marikivy sy asidra kokoa ireo. Mitovy ny fisehony, mitahiry ny tsy fitovian'ny loko. Ny manga manga dia mamy sy manga, ankoatr'izay, azo lanina mivantana izy ireo, etsy ankilany, ny mena noho ny tsirony, voaomana tsara izy ireo.
Tsy mahazatra ny mahita azy ireo any amin'ny magazay toy ny vokatra vaovao, satria tena tsy vokatra laniana be loatra io. Na izany aza, any amin'ny magazay vokatra manokana
Manaraka izany dia holazainay aminao ahoana no ahafahan'ny cranberry manampy anao?
Izy ireo dia misoroka ny aretin-tsaina
Ampy izy ireo raha ny misoroka na manamaivana ny aretin-kibo, ary izany dia vokatry ny habetsahan'ny antioxidants betsaka ao aminy. Tsy tokony hadinontsika fa manan-taninina ireo blueberry ireo izay manome tombony amin'ny antibiotika izay manampy antsika hisoroka io karazana aretina io.
Mampihena ny risika homamiadana
Ny homamiadana amin'izao fotoana izao dia iray amin'ireo aretina atahoran'ny olona indrindra, afaka manafika ny faritra rehetra amin'ny vatana izy ary miankina amin'ny ambaratongam-pivoarana dia aretina mahafaty.
Ny fanjifana cranberry, toy ny sakafo voajanahary maro hafa, dia azo ampiasaina ho fitaovam-piadiana fisorohana tazomy ny homamiadana. Manampy amin'ny ady amin'ny mety hisian'ny fiparitahan'ny sela homamiadana raha vitsy ireo, ankoatr'izay, tsy manimba ny sisa amin'ny sela.
Kamban-tany amin'ny lingonberry manana proanthocyanidins, akora sasany izay manampy trangan-javatra hafahafa sy manatsara ny fahasalamana amin'ny ankapobeny. Manemotra ny fotoanan'ny fahanteran'ny hoditra izy ireo amin'ny alàlan'ny fanesorana ireo radikaly maimaim-poana sy ny fiasan'izy ireo amin'ny hoditra. Noho izany, raha te hahita ny hoditrao tsara kokoa ianao, dia aza atsahatra ny mihinana cranberry.
Ny voajanahary voajanahary
Cranberry dia manana antioxidants be dia be, ary koa anti-inflammatories. Noho izany, voalaza fa tena mahasoa azy io ahenao ny lalan-dra sasany toy ny kibo mivonto, gazy, henjana, hozatra, fanaintainana sns.
Manatsara ny fahitana
Ny fahitana amin'ny fandehan'ny fotoana dia mety hijaly ihany koa amin'ny fahasimbana sy ny fahasimban'ny oxidative, ny vatan'ny retina amin'ny eyeball dia mety ho simba mora foana. Noho izany antony izany, manoro hevitra anao izahay mba hihinana cranberry mba hahafahan'ny anthocyanins manampy anao hisoroka ireo fahasimban'ny maso ireo.
Sakafo manohitra tavy
Raha mitady hihena ianao, dia azonao atao ny mampitombo ny fihinana cranberry amin'ny sakafonao. Misy fibre izy ireo ary tsy manome kaloria betsaka. Voankazo mahasalama Azonao atao ny mihinana mba hifehezana ny fiasan'ny tsinay ary hanampy anao hahatsapa ho afa-po kokoa noho io fandraisana anjara lehibe amin'ny fibre io.
Mihetsika toa azy ireo izy ireo neuroprotective, noho ny antioksidana avo lenta. Ho fanampin'izany, ny asidra galika dia miasa amin'ny fampitomboana ny herin'ny rafi-pitondran-tena.
Misoroka aretina toy ny Alzheimer, Parkinson's izay misy fiantraikany mivantana amin'ny fampandrosoana voajanahary sy ara-dalàna ny asa kognita.
Ny fihinanana cranberry dia afaka manampy antsika manatsara ny fahatsapana insuline amin'ny olona matavy loatra izay mahatohitra an'io hormonina io. Izy io dia miady amin'ny diabeta ary manampy ny vatana hametaveta ny gliosida amin'ny fomba marina ary manakana ny fiakaran'ny siramamy ra tsy hiakatra be loatra.
Ankoatra izany, manampy amin'ny fisorohana ny fitomboan'ny glucose amin'ny ra, fanatsarana ny valin'ny insuline ao amin'ny vatana. Amin'izany fomba izany dia tsara fitaterana ny otrikaina ary mivezivezy tsy misy olana ny ra. Fisorohana ny fiangonan'ny kolesterola ao amin'ny ra sy ny lalan-drà.
Mampitombo ny tahan'ny kolesterola tsara
Araka ny fantatrao, misy izy ireo karazana kolesterola roa, ny HDL tsara, na ny LDL ratsy. Amin'ity tranga ity, ny cranberry dia manampy amin'ny fanafoanana ny kolesterola ratsy ary hampitombo ny tahan'ny kolesterola tsara.
Hitombo ny asanao sy ny fahatsiarovanao
Si buscas mampitombo ny fahaizanao misaina andramo mihinana cranberry be dia be, ho fanampin'izay dia hanampy anao hanatsara ny fitadidianao sy ny fahaizanao izy ireo. Ny fakana ireo voankazo dia ahafahana manatsara ny dingan'ny fianarana sy ny fitadidiana amin'ny ankapobeny.
Ny cranberry dia sakafo izay mety ho hitanao amin'ny vokatra voajanahary, amin'ny zava-pisotro na amin'ny kapsola. Na inona na inona tianao itadiavana azy dia alao antoka fa maniry manga sy manana kalitao tsara ny blueberry satria ity fomba ity no hankafizan'ny vatanao sakafo be fananana sy tombontsoa ho an'ny vatana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » sakafo » Cranberry mena